23 Apps Waxaad u Baahan Tahay Si Download Ka hor safarka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 23 Apps Waxaad u Baahan Tahay Si Download Ka hor safarka
Waqtiga Akhriska: 12 daqiiqo
Waxaan dhawaan ku qoray blog ah oo ku saabsan Fuushan la kids on tareen markaasuu idin siiyey qaar ka mid ah talooyin loogu talagalay ilaalinta yaryarkiinna aad marti qaaday. Akhriska buugaagta, ciyaaro Uno, iyo dhagaysiga buugaagta codka waa hubaal waa waajib qof kasta, laakiin waxaa jira kumbuyuutarro barnaamijyo ah oo la soo dejinayo ka hor intaadan u safrin halkaas oo aan aaminsanahay inaysan ku madaddaalin doonin oo keliya laakiin ay kaa caawin doonto inaad sameyso safarkaaga dheeraad ah oo abaabulan oo xiiso leh! From Store App si ay Google Play, waxaana ilaa qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee lagu soo koobay 23 Apps Waxaad u Baahan Tahay Si Download Ka hor safarka. All aad u baahan tahay waa casriga ah iyo mararka qaar ka hor safarka soo socda.
Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Bogagga Tigidhada Tareenka ee ugu jaban Adduunyada.
1. Waayo, A Place Si Joog: Airbnb
Haddii ay tahay sharci ee magaalada aad booqashada ama ma, Airbnb waa magaca qoyska. Tani waxay xaqiiqdii waa mid ka mid ah Apps aad u baahan tahay si ay u download hor safarka. dalabyo app ka fog qiimaha jaban, iyo waayo-aragnimo dheeraad ah oo dhab ah by jidaynayey isticmaala in la maxaliga ah sii joogo, ama ay guriga. app ayaa sidoo kale waxay bixisaa a feature yeedhay Saffarada, oo bixisa Waaya-aragnimada uu ka soo xusho inta aad joogto. Waxaan hubnaa ma noqon doonto dheer ilaa ay bixisaa wax walba oo aad u baahan tahay in mid ka mid ah go, laakiin hadda, xulashooyinka ay bixiyaan waa hubaal in la soo dejisto.
Dijon ilaa Paris tareenka
Lacagtan waxaa loogu talagalay Paris tareenka
London ilaa Amsterdam tareenka
2. Barnaamijyada Aad U Baahan Tahay Inaad Soo Dejiso Ka Hor Intaadan Safrin Qolka Hoteelka daqiiqada U Dambeeya: Hotel Caawa
Runtuna waxay tahay in mararka qaarkood aad Airbnb dhici doonaa iyada oo loo marayo. Taasi waa ka biyodiiday kaliya ee app. Laakiin ha ka welwelin, weli waad heli kartaa qorshaha B a. Hotel Caawa waa adeeg la isku hallayn karo in badhaadho heshiisyo daqiiqadii ugu danbeysay-. Wada-hawlgalayaasha ayaa shirkadda la hotels in ay bixiyaan qiimo dhimis on qol madhan, oo aad noqon doontaa in ay ku ballansan mid ka mid ah under 10 seconds. Waxa kale oo aad ka heli 24/7 adeegga macaamiisha ka kooxda Hotel Caawa, haddii ay dhacdo wax aad ddonayseen.
London ilaa Brussels tareenka
London in Paris tareen
Linz ilaa Salzburg tareenka
Socdaal ku tegaya Paris tareen
3. Barnaamijyada Soo Dejista Kahor Intaadan Safrin Hoteellada Hoteeliska ah ee Horey u Qaatey: Hopper
Hopper waa app duulimaadka iyo hotel a in helaa aad qiimaha ugu wanaagsan ee jaale. Waxaa lafaguraa xogta si ay ula socdaan qiimaha iyo saadaalin jeer ka jaban in qolalka keydka iyo duulimaadyada buugga. Sida laga soo xigtay website-, faanayey a 95% heerka guusha ee saadaasha kaydadka ilaa hal sano ka hor. Aan xun!
Salzburg ilaa Vienna tareenka
Munich ilaa Vienna tareenka
Graz ilaa Vienna tareenka
Prague in Vienna tareenka
4. Barnaamijyada Waa inaad Soo Degsataa Kahor Safarka Isbarbar-dhigga Qiimaha: kayak
Inkasta oo aan hore u helay apps yar halkan hoy iyo safarka qorshayaasha, Kayak waa app dhan-in-mid ah taas oo ka caawisa qiimaha barbardhigi dhexeeya matoorada kala duwan search for dhan baahida safarka aad. Tan waxaa ku jira hotels, duulimaad, Kiraynta baabuur, iyo xataa baakadaha safarka. Ka faa'iideyso qaddarkeeda ballaadhan ee isbarbardhigga ah si aad u xajiso dhammaan safarka aad ugu baahan tahay hal meel.
Munich ilaa Salzburg tareenka
Vienna ilaa Salzburg tareenka
Graz ilaa Salzburg tareenka
London ilaa Lyon tareenka
5. Barnaamijyada Aad U Baahan Tahay Inaad Soo Dejiso Kahor Safarka Tigidhada Tareenka: Save A tareenka
Haddii aad u safraya Europe oo dhan, waxaa jira fursad wanaagsan aad doonaa jidka aad ku sameyn tareen. gaadiidka dadweynaha fursadaha in Europe waxaa caan ku tahay links cross-dalka, iyo halka duulimaad dhakhso yihiin, Tareenada badan yihiin haboon, oo intaa ka badan, iyo adeeg badan oo wadooyinka ka badan. Haddii ay dhacdo in aad tahay qof u baahan ee tigidhada tareenka, download Save A tareenka app si ay u raqiis ah wax iibsiga oo sahlan.
Dusseldorf wuxuu tagaa Munich tareenka
Dresden waxaa loo raacay Munich tareen
Nuremberg ilaa Munich tareenka
Bonn ilaa Munich tareenka
6. Barnaamijyada Soo Dejista Ka Hor Intaadan Safrin Madadaalo Ku Socda: Netflix
By hadda aynu wada ognahay waxa Netflix waa. Haddii aadan samayn, soo dhawaynaynaa in aduunyo cusub! Saxiix tijaabo ah oo lacag la'aan ah, download dhan shows jecel yahay ama movies oo aan u daawado halka aad tahay on tareen, oo aan baahida loo qabo WiFi! Maskaxda ku hay in ay muujinayso kala duwan ayaa laga heli karaa sida laga soo xigtay waxa dalka aad booqanaya, sidaa darteed haddii aad gabi ahaanba caadaysatay in mid ka mid, Hubi in aad kala soo bixi sida dhacdooyin badan intii suurto gal ka hor inta aanad ka gudbaan soohdinta!
Amsterdam ilaa London tareenka
Rotterdam ilaa London tareenka
Paris ilaa London tareenka
Brussels ilaa London tareenka
7. In aan kala tagno Kharashyada Your Iyadoo Friends: Splittr
La dhoofidda saaxiibo? Great! Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud waayo, wax si aad u hesho sirgaxan waa haddii aadan kala qaybsan tahay lacagta safarka aad si sax ah. Iska ilaali khilaafka oo u isticmaal taleefankaaga gacanta si aad si fudud ugu kala qaybsato kharashyada saaxiibbada. Haddii aad qabto koox ka mid ah, tani waa mid ka mid ah barnaamijyadooda aad u baahan tahay si ay u download hor safarka. Splittr si gaar ah waxaa loogu talagalay dadka u safraya. Ku qor kharashaadka on go ah, oo ay ku jiraan kuwa ka bixisay waxa iyo app samayn doonaa intiisa kale.
Booqashada dal oo kala duwan iyadoo lacagaha kala duwan? dhibaatada No. Dhammaan lacagaha waxaa taageera oo aad qasan kartaa lacag aan haysan si ay samayn naftaada diinta lacagta.
Amsterdam ilaa Berlin roob
Leipzig ilaa tareenka
Hanover ilaa Berlin tareenka
Hamburg ilaa Berlin tareenka
8. Si Baro Imisa Si Tip: Globe Talooyin
Iyadoo app this waxaa laga heli karaa oo keliya on macruufka, GlobeTips waa qalab cajiib ah in gargaar kuwa wareersan oo ku saabsan dhicin caalamka. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay socotada horey u ahaan jirtay dhaqalaha ku saleysan luqunta kuwaas oo halgamaya inta dalka dibaddiisa ah. Haddii aad tahay qof in France ama Spain, ka faa'iideyso GlobeTips si aad u barato inta lacag ee lagu tilmaamo dhammaan xirfadaha.
Nuremberg ilaa Stuttgart tareenka
Munich ilaa Stuttgart tareenka
Frankfurt ilaa Stuttgart tareen ayuu raacaa
Heidelberg ilaa Stuttgart tareenka
9. Si Qabooji Out: dajiyaan
Haddii aad tahay nin socoto ah habdhiska, mid ka mid ah Barnaamijyada Aad U Baahan Tahay Inaad Soo Dejiso Ka Hor Intaadan Safrin Waa Xasilooni, waa barnaamij kuu noqon doona saaxiibkaaga ugu fiican. Tani qalab safarka ku anfacaya ayaa xamuulka ee meditations kala duwan ee walaaca, is-dabacsan, neefsashada, iyo in ka badan. Waxaa sidoo kale dalabyo dabacsan dhawaaqa inuu kaa caawiyo inaad nasato. Aniga oo ah musaafir culays badan naftayda, Xasillooni ayaa iga caawisaa in aan sii, si fiican u, is deji wadada.
Paris ilaa Strasbourg tareen
Luxembourg ilaa Strasbourg tareenka
Nancy ilaa Strasbourg tareenka
Dijon ilaa Strasbourg tareenka
10. Si Hayso Xusuusaha Your: Live Trekker
Qoraalka ee joornaal duq-dugsiga laga cabsado. Laakiin wax ku saabsan warqad ka dhigan tahay in aad halis u ah waxa laga badiyay, gaar ahaan marka aad booqanaya dalal badan. Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aad soo dejiso ka hor safarkaagu waa livetrekker.com. Journal marti si aad u eegi kartaa dib safar aad on map la wada qabanayo. app wuxuu kuu raadka sida aad u tagto, sixitaanka line cas oo ay la socdaan map a on wadada saxda ah aad qaadato; app ayaa sidoo kale kormeero aad xawaaraha iyo sare, taas oo weyn oo loogu talagalay dadka safarka u quudhin. Ku dar images, video, maqal ah, oo qoraal ku sii wada, abuurista qorka safarka multimedia aad la wadaagi karto! Free, macruufka iyo Android, livetrekker.com
Rimini wuxuu u socdaa Milan tareenka
Rome ilaa Milan tareen
Bologna ilaa Milan tareen
Verona ilaa Milan tareenka
11. Si aad Naftaada ilaali Organized: PackPoint
Waxaa laga yaabaa in kaliya reyn ah socday tuurnimo, laakiin mar walba waxaa jira wax aan illoobin inay sameeyaan ama ay alaabahooda ka hor safar. Nasiib wanaag technology halkan waa in ay mar kale badbaadin maalintii. download PackPoint! Waxa ay u muuqataa at Saadaasha hawada ee taariikhaha iyo goobaha aad safarka. Waxaa sidoo kale ku waydiin doonaa in aad dooratid hawlaha aad ka qayb qaadan karaa inta lagu guda jiro safarada aad, sida kulan ganacsi, dabbaasha ee balli, ama qado, malana. Markaas waxaa u soo bixin doonaa liiska xirxirida alaabta waa in aad soo ku salaysan hawlaha kuwaas oo ah. Snazzy, xaq u? Waxa kale oo aad la wadaagi karto waxa aad ka heli saaxiibadaa, samaynta marti ahaayeen fudud, sidoo kale! sidaas xusuusan tip this muhiim ah oo Apps aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka hor inta uusan u safrin.
Brussels ilaa Amsterdam tareenka
Hamburg ilaa Amsterdam tareenka
Berlin ilaa Amsterdam tareenka
Paris illaa Amsterdam tareenka
12. Wixii Talo On Hawlaha: TripAdvisor
TripAdvisor waa app a super oo ku siin kara malaayiin dib u eegista ah oo kaliya oo ku saabsan wax ka, hab sahlan oo dhakhso ah! Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan waa in dib u eegista ah, fikradaha, videos, iyo sawiro waa ka dadka REAL, si aad u ogaato waxa sharci ah! Isku day inaad ka soo shaqayn dhow Me TripAdvisor ee si aad u hesho meelo si wanaagsan u-dib loo eego dhow, laakiin feature ugu fiican app leeyahay in ay bixiyaan waa tirada dalalka ay taageerto - waxa kaliya oo ku saabsan meel kasta, taas oo ka dhigaysa Hanuuniye lagama maarmaanka u ah socotada kasta. Waxaad sidoo kale weydiin kartaa su'aalo safar gaar ah ee forums app ama ku dar dib u eegista adiga kuu gaar ah si la mid ah in ay kaalmo.
Cologne ilaa Frankfurt tareenka
Munich illaa Frankfurt tareenka
Hanover ilaa Frankfurt tareenka
Hamburg ilaa Frankfurt tareenka
13. Si Baro Si hadal Like A Local: Duolingo
Inkastoo si tartiib ah kula baaqyada ka badan-buunbuuniyey gacanta hadlayay muuqataa xiiso leh, mararka qaarkood ka heli kartaa wax yar daalo a. Ku qor Duolingo. Haddii aad tahay qof khatar ah oo ku saabsan helitaanka in la maxalliga ah, download app this!
Waxay bixisaa koorsooyinka heer bilow, laakiin waxa ay sidoo kale qalab weyn oo kuwa raadinaya in la cadaydo up on luqadood oo kala duwan. Waxa kale oo aad la hadli kartaa Axe ku qoran luqado dooro. Tani waxay si gaar ah waxtar u yeelan kartaa markaad isku dayeyso inaad barato weedho aad u badan tahay inaad ku isticmaasho dibadda.
Antwerp oo tagta Brussels tareenka
Amsterdam ilaa Brussels tareenka
Paris ilaa Brussels tareenka
14. Si aad u ogaato maxay tahay Waxay ku yidhaahdeen: Google Translate App
Inkasta oo aan hore u talinayaa Duolingo, haddii aad tahay qof in a time-yiddidiilo iyo raba in ay ku-waqtiga dhabta ah, Google Translate waa app ah in la isticmaalo. Waxaa qoreysa aqoonsi cod iyo asal ahaan luqadda kasta oo shisheeye aad abid arki doonaa kulanka, this mid ka mid ah Chine turjumaadda ugu fiican samaynta. Waa bay haddii aad heysato Android ama iPhone, iyo xitaa offline lugeeyaa.
Berlin ilaa Dresden tareenka
Hanover ilaa Dresden tareenka
Potsdam ilaa Dresden tareenka
Nuremberg ilaa Dresden tareenka
15. Si aad u samaysato saaxiibo cusub: La kulan
Haddii aad tahay nooca socotada jecel inay saaxiibo cusub halka safraya, ma ka fog eegto. Meetup waa app ah oo heegan u ah gacan ka aad isku aragtida dadka waawayn oo dhan ka hor tago ceshay. Waxaad u abuuri karaan kooxaha xiisaha ku salaysan, iyo in la abuuro dhacdooyinka sida neefle bar iyo cuntada iyada oo dadka degaanka. App wuxuu xitaa leeyahay meel loogu talagalay qoysaska in ay ka qayb qaataan hawlaha kid-friendly. Fiican!
Nuremberg ilaa Prague tareenka
Munich ilaa Prague tareenka
Berlin ilaa Prague tareenka
Vienna ilaa Prague tareenka
16. Si Hel Qiyaastii Markaad Tagto: Uber
In kastoo aan had iyo jeer ku talin doonaa iyadoo la isticmaalayo tareen halkii gaariga markii aad socoto, haddii aad ka heli naftaada soo daahay uu yimid habeenkii ama cinwaan meel aan adeeg aad u baahan doontaa in aad isticmaasho Uber. Inkasta oo aan dal kasta uu leeyahay Uber ama ay tartanto US Lyft, ku dhawaad ​​dalka kasta uu leeyahay app taxi ah nooc ka mid ah. Haddii aad tahay qof in Kazakhstan ama France, raadso barnaamijka taksiga ee deegaankaaga oo hubi inaad soo dejiso ka hor intaadan tareenka ku boodin.
Munich ilaa Zurich tareenka
Berlin ilaa Zurich tareenka
Basel ilaa Zurich tareenka
Vienna ilaa Zurich tareenka
17. Si aad u maraan kuwa loogu fuuli jiray Waddooyinka: Google Maps App
Marka aad ku dejiyaan oo helay naftaada wareegaya jidadka raadinaya baguette ugu fiican, waxaad u baahan doontaa Khariidadaha Google si aad u hesho agagaarka. maxaad? Maxaa yeelay, Khariidadaha Google waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu fiican adduunka navigation. From jihooyinka socodka jadwalka tareenka, Google ayaa kugu daboolay. xitaa wanaagsan, aad kala soo bixi kartaa maps loo isticmaalo offline, taas oo macnaheedu yahay aagagga leh WiFi-ga dhibcaha leh wali waad ka heli kartaa bistro qarsoon luuq.
Si download maps, si fudud u jiheysan Khariidadaha Google on your smartphone iyo Dul khariidada aad jeceshahay in isticmaalka. Marka waxa xuddun u ah oo ku saabsan meelaha aad la doonayo, nooca in “maps OK” galay bar raadinta. Google bilaabi doonaan in ay ka soo dejisan ee maps offline in aad telefoon kuu isticmaalka waqti kasta. In ay!
La Rochelle ilaa Nantes tareenka
Toulouse in La Rochelle tareenka
Bordeaux ilaa La Rochelle tareenka
Paris ilaa La Rochelle tareenka
18. Barnaamijyada Si Loogu Soo Dejiyo Si Loogu Raaco Safarkaaga: TripIt
TripIt waa barnaamij lasocodka safarka oo ka caawiya abaabulka dhammaan macluumaadka safarkaaga hal meel. From jaale diyaarad si Boos hotel, TripIt qabanqaabisaa wax kasta oo fudud loo akhrin faahfaahin in aad ku hayaa on track. Ama si toos ah app ka link xisaab-aad, ama u gudbi dhammaan emaylkaaga xaqiijinta, iyo TripIt samayn doonaa intiisa kale. Available on desktop, Android, ama Apple iPhone, waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho meel kasta oo adduunka ah.
Genoa ilaa Venice tareenka
Turin ilaa Venice tareenka
Parma ilaa Venice tareenka
La Spezia ilaa Venice tareenka
19. Si aad u Ogaato Your Lacagta Exchange Rate: Lacagta App by Save A tareenka
Iyada oo ay tani ka mid ah waxaa laga yaabaa in Daaqad Misbaax ku yar ka badan, waxaa jira nasasho jeer baan ku joogey wadada aan xogta ama WiFi oo ay ku doonaya in ay ogaadaan qiimaha sarrifka. Haddii ay tahay darawal har taxi ama safar doonayo in aad bixiso lacag caddaan ah, isagoo app ah on gacanta ku fal sida Lacagta waxay noqon kartaa uubs. Save A tareenka app lacagta shuqullada on ama offline sidaas darteed waa mar walba la heli karo marka aad u baahan tahay.
Basel ilaa Interlaken tareenka
Bern ilaa Interlaken tareenka
Lucerne oo ku socota Interlaken tareenka
Zurich wuxuu ku socdaa Interlaken tareenka
20. Waayo, Wax walba: WhatsApp
Haddii aad horay aadan u app this on your phone, aad u hesho. Inkastoo North America ayaa inta badan seegay app mobile xogta ku salaysan ku, WhatsApp waa dunida oo dhan loogu isticmaalo fariimaha, wicitaanada fiidiyowga, iyo wicitaanada codka. Its caan waa sida in ganacsatada ugu dibada shaqeeyaan tiro WhatsApp ah ee intaa dheer in ay ama xitaa Sidaa awgeed, telefoon lambar caadiga ah. Nagu kalsoonow markaan dhahno waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso WhatsApp.
Florence ilaa Arezzo tareenka
Perugia ilaa Arezzo tareenka
Bologna ilaa Arezzo tareenka
Siena ilaa Tareenka Arezzo
21. Barnaamijyada Aad U Baahan Tahay Inaad Soo Dejiso Kahor Safarka Duullimaadyadaada: LoungeBuddy
Inkasta oo ma ahan mar walba fikradda fiican inuu u duulo, gaar ahaan gudahood Europe, mararka qaarkood aad u baahan doontaa in la geeyay garoonka diyaaradaha si ay u madax meesha tareenada ma aan tegi karo. Haddii aadan aakhirka in garoonka diyaaradaha, naftaada ku Mannaysanno iyo download LoungeBuddy, app a anfacaya safarka kuu ogolaanaya in aad si aad u iibsato jaban saalooyinka garoonka helitaanka. Tani waa gaar ahaan waxtar leh oo ku saabsan kuwa layovers dheer, sida cuntaqda garoonka bixiyaan cuntada iyo cabitaanka oo lacag la'aan ah. More muhiimsan, waxay u dhaqmaan sida magangal ka dhaqdhaqaaqa iyo hawlaha inta badan laga helaa boosteejada garoonka diyaaradaha si Layover soo socda ay noqon doontaa more xiiso leh.
Berlin ilaa Aachen tareen
Frankfurt ilaa Cologne tareenka
Waxaa loo taxay Cologne tareenka
Aachen ilaa Cologne tareenka
22. Waayo, North Americans In Europe: Ton Conversion App
Halka qaar kalena ay jecel yihiin in ay ku qosla North Americans iyo u hogaansanaanta hanti ay nidaamka Imperial ee cabiraada, waxay abuuri karaan sabab dhab ah walaac marka ay dibada u jiheysan. Sida ugu dhakhsaha badan waa sagaashan kiilomitir saacaddi? Waa imisa kiilo ah oo baastada miisaantaan? Ma dhammaan su'aalahan jawaabay oo aan raadinaya doqon soo degsado ka app ton Conversion in aad telefoon ka hor inta aadan bilaabin safarkaaga ama isticmaalaya Save A Tareen app ee u dhigma laga heli karaa boggayaga apps qaybta Save A Tareen Blog.
Berlin ilaa Rothenburg Ob Der Tauber tareenka
Stuttgart illaa Rothenburg Ob Der Tauber tareenka
Munich ilaa Rothenburg Ob Der Tauber tareenka
Frankfurt ilaa Rothenburg Ob Der Tauber tareenka
23. Si gala The US: Mobile App Passport
The app dowladda rasmi ah oo kaliya liiska this, Mobile Passport waxaa la siiyaa by US Customs iyo Ilaalinta Xuduudaha inay caawimo safra geli Maraykanka fudayd. waxaa Download hor inta aanad iman Maraykanka iyo u isticmaali inay buuxiyaan aad macluumaad ku saabsan telefoonka gacanta aad. Markaasuu, gudbiso foomka aad mar aad hoos u taabto oo u boodboodaan line weyn for dhaansado socdaalka ee Maraykanka. Waa lacag la'aan ah oo ay fududahay in la isticmaalo!
Bremen ilaa Nuremberg tareenka
Leipzig ilaa Nuremberg tareenka
Hanover ilaa Nuremberg tareen
Hamburg ilaa Nuremberg tareenka
Taasi waa liistadayada barnaamijyada ugu wanaagsan ee la soo dejiyo ka hor safarka, haddii ay tahay safar tareen dheer ama kaliya geeyo degaanka. Haddii aad u baahan tahay gargaar dheeraad ah la qorshyaasha safarka aad, Save A tareenka dalabyo tababar tigidhada heerar jaban, xorayn aad miisaaniyadda hawlaha raaxa leh marka aad timaado meesha aad u socoto!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fapps-download-traveling%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad leedahay website a, aad ku xidhan karto our Save A Feed RSS tareenka.
Apps longtrainjourneys tareen safarka safarka tareenka safarka traveltips